युएईमा कामदारलाई हप्तामा दुई दिन विदा, कस्ता कामदारहरुले पाउनेछन यो सुबिधा ? - ramechhapkhabar.com
युएईमा कामदारलाई हप्तामा दुई दिन विदा, कस्ता कामदारहरुले पाउनेछन यो सुबिधा ?
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले हप्तामा दुई दिन विदा दिने भएको छ । नयाँ वर्ष २०२२ को जनवरीबाट लागू हुने गरि युएईले आफ्नो कार्यहप्ता सोमबार देखि शुक्रबारसम्म पाँच कार्य दिन बनाउने भएको हो ।
जनवरीदेखि युएईका कामदार तथा कर्मचारीले शनिबार र आइतबार विदा पाउनेछन् । कर्मचारीहरुको कार्य दक्षता उकास्ने र सामाजिक जीवनस्तर वृद्धि गर्ने सोच सहित यो व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ ।
यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि युएईमा रहेका नेपालीहरु समेत लाभान्वित हुने भएका छन् । नेपाली कामदारका लागि युएई चौथो प्रमुख गन्तव्य हो । त्यहाँको कुल जनसंख्या मध्ये करिब ३ लाख जनसंख्या नेपालीहरुको छ । युएईका सरकारी कर्मचारीहरुलाई भने पारम्पारिक मुश्लिम बिदा दिवसलाई कायम गर्दै शुक्रबार आधा दिन मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साउदी शेखले तलब वृद्धिबारे यस्तो बोले, बिदेशी कामदारमा खुसी
तेल उत्पादनको हिसाबले मात्रै नभएर अरम राष्ट्रको हिसाबले समेत शक्तिशाली रहेको साउदी अरबले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको तलब मापनमा वृद्धि गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको कुरालाई बिश्वास मान्ने हो भने साउदी अरबले छिट्टै नै अप्रावासी कामदारको तलबमा वृद्धि गर्ने छ । जसमा दक्ष ,अर्ध दक्ष र अदक्ष कामदार संगै घरेलु कामदार समेत पर्ने छन् ।
साउदी अरबले कति प्रतिशत सम्म तलब वृद्धि गर्छ भन्ने अनुमान लगाउदै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार हाल खाई रहेको तलबमा १० प्रतिशत सम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ । जुन वृद्धि तलब सरकारी तथा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने अप्रावासी कामदारहरु सबैमा लागू हुने बताइएको छ ।